Silver Airways သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် Anguilla သို့စတင်ပြေးဆွဲခဲ့သည် Anguilla ခရီးသွားသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ရေးသားချက်များ » နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း » Anguilla ခရီးသွားသတင်း » Silver Airways သည် ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၂ ရက်တွင် Anguilla သို့စတင်ပြေးဆွဲခဲ့သည်
လေကြောင်းလိုင်း • လေဆိပ်သတင်း • Anguilla ခရီးသွားသတင်း • လေကြောင်းသတင်း • ကာရစ်ဘီယံသတင်း • အစိုးရရေးရာ • Industry ည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းသတင်းများ • နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ • အခြား • Puerto Rico • ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း • ခရီးသွားသတင်း • ခရီးသွားလာရေးဟောပြောချက် • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားသတင်းများ • ခရီးသွားလျှို့ဝှက်ချက်များ
Silver Airways သည် ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၂ ရက်တွင် Anguilla သို့စတင်ပြေးဆွဲခဲ့သည်
Anguilla ရှိ Silver Airways သို့ပြန်သွားသည်
Anguilla ခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့သည် Silver Airways ကို ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၂ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် San Juan မှ Anguilla သို့စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
San Juan, Puerto Rico နှင့် Anguilla တို့အကြားနွေရာသီအတွက်ပျံသန်းမှုများသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပြေးရမည်။
ထိုလေကြောင်းခရီးစဉ်များပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် Anguilla ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ဖွင့်ရာတွင်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
နွေရာသီပျံသန်းမှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်မှစ၍ ဆန်ဂွမ်၊ Puerto Rico နှင့် Anguilla ရှိ Clayton J. Lloyd အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ Luis Muñoz Marin အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အကြားတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပျံသန်းမည်ဖြစ်သည်။ Silver Airways သည် Seaborne လေကြောင်းလိုင်း၏အဓိကကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Seaborne သည် Anguilla တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်ခဲ့သည်။
Anguilla ကိုပုံမှန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် Seaborne လေကြောင်းလိုင်းနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရှည်လျားသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလပြီးနောက် Anguilla သို့ Silver Airways ကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုသည်။ ” ဟုပြောသည် ခရီးသွား Mr. ည့် ၀ န်ကြီး Mr. Haydn Hughes “Silver / Seaborne သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားသောမိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး San Juan တံခါးပေါက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်. Anguilla သို့ ၀ င်ရောက်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ခြင်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤကျွန်းကိုနိုင်ငံတကာခရီးသွားများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်စဉ်တွင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ဟာလူကြိုက်အများဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Anguilla ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်” Silver Airways နှင့် Seaborne လေကြောင်းလိုင်းများအတွက်ကာရစ်ဘီယံစစ်ဆင်ရေး၏ဒုတိယဥက္ကPresident္ဌဗိုလ်ကြီးစတီဗင် Dowda ကြေငြာခဲ့သည်. Anguilla ၏ခရီးသွားထုတ်ကုန်မှာထူးခြားသည်။ Anguilla နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ခိုင်မာသောအပြန်အလှန်အကျိုးရှိသည်။ ဤကျွန်းတွင်ဆိုက်ရောက်လာမှုတိုးလာစေရန်နှင့်ယခုဆောင်းရာသီတွင်ဝန်ဆောင်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးသွားဖော်များနှင့်နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ”
Silver Airways ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်၊ ကြာသပတေးနှင့်စနေနေ့များတွင်တစ်ပတ်လျှင်ပျံသန်းမှုစုစုပေါင်း ၄ ခုအတွက်တစ်ရက်လျှင်နှစ်ကြိမ်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။